Zvikonzero zvishanu zvekugadzira Chiono Bhodhi Muna 2021 (+ Sei Kuti, Pfungwa) - Blog
Zvikonzero zvishanu zvekugadzira Chiono Bhodhi Muna 2021 (+ Sei Kuti, Pfungwa)
Zvikonzero zvishanu zvekugadzira Chiono Bhodhi
Unoona Mabhodhi Ekuona Anoshanda Here?
Maitiro Eko Kugadzira Chiono Bhodhi
20 Vision Bhodhi Pfungwa Kuti Iwe Utange
Matipi mashanu Okuwana Zvikuru Kubva pane Yako Vision Bhodhi
Kana iwe uchifunga kuti mabhodhi ekuona ndeyekunyepedzera, saka jee iri pauri, shamwari yangu.
sei kusada mukomana
Mira kumhanyisa maziso ako uye unzwe ini kunze.
Ivo vanoshanda chaizvo, uye chikonzero nei chiri nyore kwazvo.
Bhodhi rekuona inzvimbo inoera inoratidza zvaunoda muhupenyu. Paunosungirirwa munzvimbo yaunozviona zuva nezuva, bhodhi rako rekuona rinounza zvinangwa zvako uye zvishuwo kuhupenyu.
Bhodhi rekuona chiratidzo chemuviri chechinangwa kana zvibodzwa zvauri kuronga kuzadzisa.
Iyo karaji yezvinhu izvo zvakagadzirirwa kukamba kutanga kwako kufunga uye nekukubatsira iwe kuona izvo zvinangwa.
Funga nezvazvo sebhodhi rePinterest, asi mune chaiko nyika…
… Chimwe chinhu chaunobaya mapikicha, magazini-akachekwa-cheka, masheets, uye zvimwe zvinhu zvinotyisa kuitira kuti urambe uchifemerwa uye uchikurudzirwa kune chimwe chinhu chaunoda kuita, kuve, kuve nacho, kana kuratidza zvimwe.
Saka gadzira 2021 iro gore rechinangwa kutevedza-kuburikidza nekugadzira bhodhi rekuona kuti ikupe iwe yakajeka mufananidzo wekwaunoda kusvika.
Ndeapi mabhenefiti ebhodi yekuona (dzimwe nguva inonzi bhodhi rezvinangwa kana bhodhi reroto)?
Mumwe angakubatsira sei kuzadzisa ramangwana uye budiriro hwaunoda?
1. Vision mabhodhi anoita kuti iwe ufunge nezve izvo zvauri chaizvo zvaunoda.
Kugadzira bhodhi rekuona kunomanikidza iwe kuti uwane nguva yekugara uye CHOKWADI funga nezve izvo zvauri kuda kubva muhupenyu.
Ndine chokwadi chekuti iwe unofunga nezve izvo zvinhu zvaunoda zvakanyanya, asi iwe unonyatso tarisa pazviri?
Unozvinyora here chero kunze kwemusoro wako?
Bhodhi rekuona rinokumanikidza kuti uende kupfuura kufunga kwakajairika uye tarisa pazvinangwa zvako uye zvishuwo.
2. Vision board anokubatsira kuti usamuke.
Hupenyu hwedu hwakamanikidzwa uye kufashukira. Tinomuka, tinoshanda, uye tine mabasa edu epamba.
Isu tinogumira kuchinjika munzvimbo medu dzezuva nezuva uye tinogona kuita senge robhoti nekufamba kwenguva.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvinoita kuti vanhu vazhinji vanzwe kunamira muhupenyu.
Ivo vaneta uye vanoshanda zvakawandisa. Ivo varasikirwa nekubata nerutivi rwavo rwekusika.
Izvi zvinoita sewe here?
Bhodhi rekuona inzira inoshanda yekuzvisunungura.
Buda muuropi hwako hwakanyatsorongwa uye rega majusi ako ekugadzira ayerere.
Buda mu funk yako. Kanda zvimwe zvisina kujairika pamwechete. Buda mubhodhi rako.
Iwe unowana mufananidzo.
3. Mabhodhi ekuona anokupa iwe chiyeuchidzo chezuva nezuva chekurota uye zvinangwa zvako.
Icho chikonzero chekuti mabhodhi ekuona anoshanda zvakanyanya nekuti iwe unovaona mazuva ese.
Kufungidzira ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye anoshanda epfungwa ekurovedza muviri iwe aunogona kuita.
Paunoona chimwe chinhu chinokukurudzira zuva nezuva, iwe unogara munzira.
Kunyangwe paunotarisana nezvipingaidzo, iro bhodhi rekuona richaramba riripo rakagadzirira kukukurudzira iwe zvakare.
4. Mabhodhi ekuona anozoita kuti mese murasirwe pamoyo.
Kuona bhodhi rako rekuona kuchakubatsira iwe nechishuwo kubatana nezvinangwa zvako.
Inogona kukubatsira iwe kuona mikana kana kungoita kuti iwe ufungidzire kuti chimwe chinhu chinganzwa sei.
Kana ukadzingwa basa uye kufarira chimwe chinhu , zvinokukurudzira kuti uite chiito.
5. Vision board anonakidza.
Bhodhi rekuona inzira inonakidza, isina njodzi, uye isina kushushikana-kuburitsa zvidimbu zvako zvakadzika, zvakasvibira zve kurudziro ndisingazviongorore.
Iwe haufanire kuronga, kuongorora, kana kushongedza bhodhi rako. Ingofara uye uzviise pamwechete. Chinja icho kumusoro. Ita zvinonzwa zvakanaka kwauri.
Haifaniri kunge yakarongeka kana yakanaka. Rinongofanira kukurudzira iwe.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, mabhodhi ekuona anoshanda nekuti anotora pfungwa uye zviroto mumusoro mako wozvishandura kuita chimwe chinhu chaicho uye chinooneka.
ASI, uye ihombe asi, ivo vanongoshanda iwe kana iwe wakagadzirira kushanda navo.
Izvi zvinorevei? Iwe unofanirwa kusangana nebhodhi rako rekuona uye woishandisa kutungamira zviito zvako sezvaunofambira mberi kuita kuti zvinangwa zvako zviitike.
Kungoita bhodhi rekuona uye kuchichengetera mukabati, kungoitarisa muchidimbu mavhiki mashoma kana mwedzi mishoma, hakusvitse iwe kwese.
Sezvo nezvakawanda zvinhu muhupenyu, iwe unoburitsa zvaunoisa mukati.
Simba rebhodhi rekuona rinouya mukukwanisa kwaro kukukurudzira kuti uite basa rinodiwa kuti zvinhu zvaunoisa pairi zvive zvechokwadi.
Kana iwe uchitenda mumutemo wekukwezva, bhodhi rekuona richakubatsira iwe kuratidza.
Ichatungamira ziso repfungwa dzako kuzvinhu zvaunoda uye zvichikubatsira iwe kufungidzira hupenyu hwako hwakaenzana nehupenyu hwawakagadzira pane yako bhodhi.
Iye zvino zvaunenge wagutsikana nesimba rebhodhi rekuona, unoita sei nezvekugadzira imwe?
Neraki, iri nyore maitiro ayo chero munhu anogona kutevedzera, kunyangwe iwe usina hunyanzvi hwakawanda kana dhizaini yekugadzira.
Zvishandiso Zvauchazoda Kune Yako Vision Bhodhi
Maonero emabhodhi ari nyore kugadzira. Iwe hauzodi zvakawanda kusvika pazvinhu.
Heino runyorwa ruzhinji, kunyangwe rako rekuona bhodhi rinogona kusanganisa zvinhu zvisina kunyorwa pano.
Rumwe rudzi rwebhodhi - unogona kushandisa cork board, poster board, kana pini bhodhi.
Chigero, tepi, mapini, kunamira kweglue - chero chaunoda kugadzira bhodhi rako.
Mamaki, zvitambi, kana zvimwe zvakashongedzwa - izvi zvinosarudzika zvachose. Kana kushongedzwa kuchiita kuti unzwe zvakanaka, saka nenzira dzose, zvibatanidze.
Magazini - apa ndipo paunogona kucheka mifananidzo uye makotesheni kubva.
Pinterest / Google / Instagram - dzimwe nzvimbo kuti uwane zviyeuchidzo zvakakwana zvebhodhi rako.
Ruvara purinda - kana iwe uchironga nezvekutsvaga imwe kana yako yese mifananidzo kubva kune internet.
Zvinhu zvinokukurudzira - mapikicha, makotesheni, zvirevo, mifananidzo, zviyeuchidzo zvese zvine nzvimbo pabhodhi rako.
Nguva - zvipe iwe yakawanda nguva yekuisa yako bhodhi pamwechete. Usaise muganho kana yako yekugadzira majusi. Chengetedza iyo nguva mubhodhi rako rekuona kuitira kuti ikubatire iwe. Dzima TV. Isa imwe mimhanzi inokurudzira. Vhenekera kenduru.
Maitiro Ekutora Iwo Akakodzera Mifananidzo Uye Makotesheni
Kuti ubudirire, bhodhi rako rekuona rinofanira kunyatso kuratidza hupenyu hweramangwana hwaunoda kutungamira.
Naizvozvo, kusarudza mifananidzo yakakodzera kwazvo inoratidza pachena ramangwana iri kwakakosha.
Izvo zvinhu zvaunoisa pane yako bhodhi zvinofanirwa kuve mugumo wekupedzisira iwe wauri kuvavarira, asi iwe unogona zvakare kusanganisira mifananidzo inoratidza matanho anodiwa kuti usvike ipapo.
Saka kunyange iwe uchigona kuve nemufananidzo mukuru unoratidza mapiramidhi eEjipitori, unogona zvakare kuve neayo anoratidza huwandu hwemari yaungade kutora rwendo irworwo.
Kana kana iwe uine mufananidzo wechiyero chinoratidza huremu hwako, unogona kusanganisira mapikicha emumwe munhu achimhanya, kana chimwe chikafu chine hutano, chinovaka muviri.
Apa ndipo panogona kuwanikwa internet. Sekugona kwazvinoita kupenya mumagazini kuti uwane mifananidzo yakanaka, ungangotadza kuwana yakanakisa nguva dzese.
Iyo internet ine inenge isina muganho kupihwa kweanogona kunge akakwana mifananidzo.
Kana iwe uchida kuisa mazwi kana makotesheni pabhodhi rako - uye isu tinokurudzira iwe kuti uite - wobva wasarudza mazwi akanaka anoratidza mhando yemunhu waunoda kuve.
Iwe unogona kushandisa mazwi mamwechete kusunga pamwechete zvinhu zvakasiyana zvebhodhi rako. Semuenzaniso, izwi rekuti 'ushingi' rinogona kugara pakati pemifananidzo yekufamba, mabhizimusi matsva, uye pamwe kunyangwe mudiwa mutsva.
Kana iwe uri kushanda pane yekuzvigamuchira / yekuzvida-wega bhodhi, mazwi senge 'anoera' kana 'akazara' akanaka.
Kana iwe uri kuyedza kubudirira muchikoro, kana uri kushanda kuti uwane rako rekurota basa, mazwi uye zvirevo zvakaita se 'kuvimbika,' 'kuzvivimba,' uye 'kuzvipira' zvinogona kuchengetedza moto mudumbu rako kuvhenekerwa kukukurudzira kuenda kumberi.
Kana iwe unogona kusarudza mamwe mazwi ane mukurumbira anoreva chimwe chinhu kwauri - tinokurudzira kunamatira mazwi mapfupi kana mottos - uye purinda izvo zvakare.
Maitiro Ekumisikidza Yako Mifananidzo Uye Mazwi
Iko chaiko hapana nzira chaiyo kana isiriyo yekuronga yako bhodhi rekuona. Hapana template yekutevera.
Vamwe vanhu vanosarudza kuisa zvinhu pese pese pavanoziviswa nematumbu avo, vachigadzira karagi yakanaka ino shatisa munzvimbo.
Vamwe vanofarira kuronga yavo yekuona bhodhi muzvikamu zvine themed kana kugadzira madiki madiki akapatsanurwa kune yega yega kurota, chinangwa, kana nzvimbo yehupenyu hwavo.
Semuenzaniso: bhodhi rekuratidzira remuchato rinogona kuve nechikamu chimwe chehembe dzemuchato, imwe yezvokupfeka neyekuwanira mazano emuchato, chikamu chimwe chekushongedza uye chikafu, uye chikamu chimwe chezvaungaitira nzvimbo.
Izvi zvinogona kugadziridzwa paunowana nzvimbo yako, gown rako, zvipfeko zvako zvemwenga, keke rauri kuenda kunohodha.
Zvinobatsira kuramba uchivaka mufaro, asi zvakare zvinokusimbisa nekuti zvakaita sekumaka mabhokisi ese aunoda kugadzirisa sezvo zuva iri raswedera padhuze.
Kuisa zvikamu izvi pamwechete kunobatsirawo nekuti kuona zvese izvi mifananidzo nguva dzose kunogona kukuvimbisa kuti uri kuita sarudzo dzakanaka, pane kusvetuka uchikurumidza.
Unogona kufunga pakutanga kuti rakapetwa mermaid gown rawaona raingove rakapenya, asi mushure mekutarisa pikicha yacho kwevhiki dzinoverengeka, kamwe kamwe ziva kuti A-line gown raizonyanya kufadza.
Maitiro iwe awasarudza kuronga bhodhi rako angangotaridza mhando yemunhu wauri.
Kana iwe uri pamusoro pe mweya wakasununguka , unogona kuwana zvinowanzoitika uye nyaya yakasanganiswa inokodzera zvaunoda.
Kana uri munhu ane tarisiro uyo anoda kuraira, iwe ungangoda zvakatsvikwa zvakatemwa zvinhu zvezvakarongeka chaizvo, kunyangwe akara-akarongedzwa zvikamu kana mabhodhi
Wedzera Kuenzanisira Pazvinenge Zvakakodzera
Ndeipi nzira iri nani yekugara uchifara nezve chinangwa chako pane kuzviisa pabhodhi?
Tora mapikicha ako uye uapinze ipapo, pamwe nezvidiki mementos yerwendo rwako kuenda kuchiroto chako.
Wakatotanga yunivhesiti mukutsvaga iyo degree iwe yawakagara uchida? Ita kuti mumwe munhu atore pikicha yako pamatanho echikoro, uchinyemwerera kumeso kwako. Pini ipapo.
Dhinda nguva yako yekirasi uye pini iyo ipapo zvakare, pamwe nemufananidzo wemabhuku ako ezvinyorwa akaunganidzwa padhesiki rako.
Izvi zvinogona kuitwa nyore nyore nechero nzira iyo yauri kutevera: nyora rwendo uye uvandudze mabhureti ekare kuti ugare uchifemerwa kuenda kumberi.
Uri kusvika matanho makuru nehutano hwako uye zvinangwa zvemuviri? Uri kuchinja vakadzi here? Kufamba kutenderera pasirese? Une mwana munzira here?
Tora mifananidzo yekufambira mberi kwako, uye yenguva dzakanaka dzakakufuridzira. Tumira matikiti ekufambisa, mareti, zvinyorwa. Chero chii chinoita kuti iwe kunyemwerera uye chinojekesa mweya wako.
Ndekupi Kwaunofanira Kuisa Yako Vision Bhodhi?
Mhinduro pfupi: chero kwauchazviona zuva nezuva.
Bhodhi rekuona rinonyanya kushanda kana iwe ukapedza kanenge maminetsi mashoma zuva rega rega uchitarisa.
Saka iwe unofanirwa kuturika kana kunamatira kune imwe nzvimbo iwe uchaiona iyo iyo nguva yenguva kana kureba.
Unofarira kubika here? Wadii kunamatira yako kumusuwo wako wefriji kana pakabhodhi?
Kumba kwako kune snug here kwaunogara wakanyarara mazuva mazhinji?
Iwe unoshanda kubva kuhofisi yekumba? Pamadziro pamusoro pecomputer yako Monitor inogona kuva nzvimbo yakanaka yekuti iende.
Kana iwe wakanyatsoomerera kune mazano, ko nezvekugadzira bhodhi rekuona kuseri kwemusuwo wako wekugezera? Nenzira iyoyo, kana iwe uchipindura iko kudaidzwa kwechisikigo, unogona kukurudzirwa panguva imwe chete!
Uye rangarira, hazvidi kugara panzvimbo imwechete. Dzimwe nguva tinova bofu kuzvinhu zvatinoona zuva nezuva.
Nekufambisa bhodhi rako rekuona kutenderera kune dzakasiyana nzvimbo mumba mako kana muhofisi, iwe unenge uine mukana wekuidzidza pane kungozvidza pamusoro payo.
Yako yekuona bhodhi inofanirwa kuve chiratidzo cheiyo mhando dzezvinangwa , zviroto, uye zvishuwo zvaunazvo.
Inofanira kunge iri chinyorwa chemhando yeramangwana iwe yaunoda kuzadzisa iwe nevako vaunoda.
Chinyorwa ichi chakatopa mienzaniso yakati wandei yenzira dzaungashandise bhodhi rekuona, asi heano mamwe mazano ekuti iwo majeji ekusika ayerere.
1. Kana iwe urikudzidza kuridza gitare, tora pikicha iwe wakabata yako.
2. Unoda kuva akasimba panyama here? Tsvaga mufananidzo weimwe yepamusoro yoga poses.
3. Ungade here kudanana naye zvakanyanya? Mufananidzo we gumi nemaviri matsvuku matsvuku achakuyeuchidza nezve chinangwa chako.
4. Unoda kuwana kukwidziridzwa pabasa? Kopa uye unama email siginecha yako, chinja zita rebasa kune raunoda, uye woriprinta.
5. Uri kuda kutsikisa bhuku here? Dhinda kavha yekumberi uye isa 5-nyeredzi Amazon chiyero pazasi payo.
6. Uri kutsvaga kuenda pamudyandigere mumakore gumi kana kuti mashoma here? Sanganisira mifananidzo yezvaunoshandisa mari yako yekurega basa, kunyangwe iri kutarisira gadheni rako kana kutamba gorofu.
7. Kutarisa ku ita tsika wekufungisisa zuva nezuva? Tora mumwe munhu kuti atore pikicha yako munzvimbo yako yekufungisisa.
8. Unoda kunatsiridza yako hunyanzvi hwekufunga ? Mashoko akadai se 'humbowo' uye 'chokwadi' anogona kuva zviyeuchidzo zvinobatsira.
9. Iwe unoshuvira here kuti iwe ungashande isingabatsiri mubazi rekuchengeta vana? Tsvaga mifananidzo yevanhu vanozviita izvozvi kana kubata marogo ezvemasangano aunoda kushandira.
10. Isafari iri muSerengeti pane yako bhaketi runyorwa? Isa mapikicha enzou, zvipembere, kana mepu yepaki yenyika kubhodhi rako.
11. Iwe unoda here kugadzira purofoti inobatsira yemari? Svora chati ine chaiyo chaiyo yekumusoro curve inoratidza kukura kwezvinhu zvako.
12. Iwe uri muimbi here? Zvichida pikicha yako yazvino chidimbu nechiratidzo chakatengeswa padivi payo.
13. Iwe unoda here kuti utore magigs pazviitiko zvikuru muindasitiri yako? Mufananidzo weumwe munhu akamira panhandare unogona kunge wakakodzera, uine mucherechedzo wemusangano padhuze payo.
14. Kana uine zvimwe zvinangwa zvekugadziridza imba, bhodhi rakazara nemavara emhando kana zvinhu zvemidziyo zvinokukurudzira.
15. Kana usati wagona kutyaira, asi uchida, tsvaga pikicha yemumwe munhu achibvarura mahwendefa evadzidzi.
16. Kudzoreredza mota yechinyakare? Mufananidzo weiyo yakafanana modhi mune yemindi mamiriro yakakwana.
17. Vanofarira zvekubheka vanogona kuda mapikicha erudzi rwemakeke kana madhiragi avanoda kugona pamwe chete nezvidimbu zvemabikirwo.
18. Kana iwe uchida kuzviita timu yemitambo, mifananidzo yekuita nemutambo iwoyo ingave yakanaka yekuwedzera. Bhonasi inonongedza mafoto ako iwe uchitamba mutambo.
19. Une chinyorwa chemabhuku chaungada kuverenga here? Dhinda mapepa avo epamberi uye wozotsiva nemamwe matsva uye paunoverenga yega yega.
20. Kana kurota kwako kuri kuzivisa uye kumbundira minimalist kurarama , ungatoshuvira kubvisa zvese asi zvekutanga kubva mukamuri yega yega yeimba yako, tora pikicha usati waisa zvinhu kumashure, wozozvinamira pabhodhi rako kuratidza kwaungade kusvika.
Vision board anoshanda, asi mamwe anoshanda zvirinani pane mamwe.
Kuti udzvinyirire kurudziro yakanyanya kubva kune yako uye woishandura kuita chiito chaicho, heano mamwe matipi epro.
1. Pair Iyo Ine Nhoroondo Yekutevera Kufambira Mberi Kwako
Kuva nekurudziro yekuona iyo inoita kuti iwe utambe nzira yako kuburikidza nezuva rega rega zvinoshamisa uye zvinobatsira kuti urambe uine shungu kumusoro, asi kuibatanidza nejenali inogona kutora zvinhu padanho rinotevera.
Tariro uye zviroto zvakakura, asi zvinoda chiito kuti zviitike.
Mujenali rako, sarudza matanho aunofanira kutora kuti uzadzise chinangwa chako, wozvinyora nenzira yainofanirwa kuzadzikiswa. Wobva wagadzira zvidiki-zvinyorwa zvezvinhu zvese zvinodiwa padanho rega.
Izvi zvinokutendera iwe kuti simbisa zviito zvako , uye ndokupa iwe diki, zvinokwanisika zvinangwa zvekuvavarira kuti urege kuzoguma kukurirwa nemufananidzo mukuru.
Ngatidzokerei kurwendo irworwo rwekuEgypt kubva muchikamu chiri pamusoro. Nyora pasi matanho aunofanirwa kutora kuti uite izvozvo zviitike.
Gadzira kuti imarii yaunoda parwendo, uye isa parutivi. Zvichida iwe unogona kuisa parutivi chimwe chikamu chemubhadharo wega wega kweX nhamba yemwedzi kuti zviitike.
Tsvaga iyo seti yemazuva ayo angashanda zvakanyanya kwauri, pamwe nechero shamwari (s) yaunofamba nayo.
Bhuka nguva iyoyo usingaende kubasa.
Bhuka matikiti, hotera, zviitiko.
Tenga zvekushandisa, uye uwane chero majekiseni kana zvichidikanwa.
Batanidza zvinhu zvese zviri zviviri pamwechete nekuwedzera chimwe chinhu kubhodhi rako kune akawanda ematanho sezvinobvira.
Sezvaunowana imwe neimwe, ipemberere! Nyora katsamba mujenali rako uye funga kunhonga paki yezvinamirwa zvegoridhe kuti uise pachikamu chakakodzera chebhodhi rako pese paunowana chinhanho chikuru.
2. Funga Zvishandiso Zvimwe Kupfuura Bepa
Mazhinji ekuona mabhodhi ane kollaji yemifananidzo, anodhinda-kunze, uye emagazini akachekwa.
Asi hapana chiri kukumisa pakubatanidza sprig yeiyo lavender nyowani kune yako, kana zvimwe zvinhu zvaunoda zveimba yako yekurara nyowani, kana kunyange mamwe madiki masokisi evana kana uri kuronga mhuri munguva pfupi iri kutevera.
Zvinhu zvaunogona kubata uye kunzwa zvinogona kubatsira kuchengetedza kufarira kwako mubhodhi rako uye kuunza zvinhu kuhupenyu zvakanyanya.
3. Shandisa Scents
Imwe yemanzwiro aunogona kukonzeresa nebhodhi rako kunhuwa.
Iwe unogona kuita izvi nemaruva, asi iwe unogona zvakare kumwaya mafuta akakosha kana pefiyumu pabhodhi rako.
Nei usinganamatire tsvimbo yesinamoni kana kurota kwako kuri kuvhura bhekari?
Hwema hwaunowedzera haufanire kuenderana nehope dzako kana zvinangwa, kunyangwe zvichingova izvo zvaunoda chaizvo.
Iyo inogona kushandiswa kukwevera kutarisisa kwako kubhodhi rako pese paunofamba uchiipfuura.
4. Dhirowa Zviroto Zvako
Dzimwe nguva haungakwanise kuwana mufananidzo wakakwana kune chimwe chezvinangwa zvako kana zviroto zvako.
Iwe unogona kuve uine chaicho chakatarwa chiratidzo chezvaunoda kubva muhupenyu.
Kana iwe uchigonesa nepenzura, peni, kana bhurasho, dhonza kana penda chimwe chinhu chinomiririra ramangwana raunoda iwe.
ndiri kupi munyika ino
Chero shandisa pepa rakaparadzana uye unamatire / pini pabhodhi rako, kana kudhirowa / penda wakananga pabhodhi rako kana zvakakodzera uye zvichibvira.
5. Bvumira Kunzwa Kwako Kukutungamirire
Pfungwa dzako dzinogona kubatsira zvakanyanya kana uchigadzira bhodhi rekuona, asi nemanzwiro ako anogona kudaro.
Teerera kune zvavari kukuudza uye chete wedzera mifananidzo inokuzadza iwe nemaonero akanaka.
Iyo yakakwana yegungwa muviri inogona kunge iri zvaunoshuvira , asi kuutarisa kunokuita iwe inzwa isingafadzi ? Zvinoita here kuti chinangwa chako chioneke sechisingakwanisike?
Bvisa iyo uye sarudza mifananidzo yezvinhu zvaunogona kuita kuti usvike icho chinangwa. Zvinhu zvine chekuita nekudya uye kurovedza muviri, semuenzaniso.
Bhodhi rekuona inzira yakapusa asi inoshanda yekukuchengeta iwe wakanangana uye kukurudzirwa mukutsvaga ramangwana raunorota.
Kugadzira imwe hakutore nguva, asi mabhenefiti anogona kunge akakura zvisingaite.
Saka chii chauri kumirira? Kutanga kugadzira imwe nhasi!
Unoda kunyatsoziva zvaunoda muhupenyu uye kuti ungazviwana sei? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
Regedza Izvi Zvinhu Zviviri Kana Uchida Kuti Ubudirire Muhupenyu
Nei Uchifanira Iwe Kuronga Kwehupenyu Hwako (Uye 7 Zvinhu Zvazvinofanira Kuva nazvo)
Usati Wazvidzivirira Iwe Pachezvako, Ita shuwa Iwe Unobvunza Uyu Mubvunzo
7 Matanho Iwe Chaizvoizvo UNOFANIRA Tora Pese Iwe Paunobvunza Izvo Zvekuchinhu Kune Chimwe Chinhu
40 Mazuva makumi matatu-Mazuva Dambudziko Pfungwa Kufuridzira Hwako Hwekukura
zvinoratidza kuti shamwari yako haikuremekedze
zvekuita mushure mekunge wabatwa uchibiridzira
mhando dzerudo rweplato pakati peshamwari
zvinhu zvaunogona kutaura pamusoro pako
kuhwina sei murume wako kubva kune mumwe mukadzi
ndiudze chokwadi chinonakidza nezvako
wwe katatu hhh theme song